Matetika ny fihetseham-po no manelingelina antsika amin'ny fiainana andavanandro, raha manao ny adidintsika amin'ny asa - sarotra be ny mandray fanapahan-kevitra tsara eo ambany fiantraikan'ny fihetseham-po. Koa mety misy ve ny fomba fitantanana ny fizotran'ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po?
Fifehezana sy fitantanana ny fihetseham-po
Ny filana ny fandinihana ny fizotran'ny fihetseham-po sy ny fitantanana ny fihetsehampo dia voamarika ela be. Noho izany, dia tsy misy fomba firy ho an'ny ankehitriny. Ary ny iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra amin'ny fitantanana ny fihetseham-po dia fiofanana amin'ny fiara. Noho ny fanampiany dia azonao atao ny mametraka toe-tsaina miorina tsara, izay tsy manelingelina ny adin-tsaina. Ny fampiofanana amin'ny autogenic dia afaka manampy amin'ny famerenana ny hery sy ny fahombiazany, satria ao anatin'io toe-javatra io dia mitombo ny vatana kokoa noho ny mandritra ny torimaso na amin'ny fitsaharana eo amin'ny sofina. Ankoatra izany, ny fampiofanana amin'ny fampiofanana dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-tsaina sy tsy fandriampahalemana.
Ny fiara mifehy ny fiara dia tsara atao amin'ny hariva alohan'ny hatory na amin'ny maraina aorian'ny fifohazana. Mila mifidy fotoana tsy dia maika ianao, mitandrema fa tsy misy drafitra ao amin'ny efitrano, satria ao anatin'io toe-javatra io dia tena mora voan'ny hatsiaka ny vatanao.
Ny fanazaran-tena amin'ny fitantanana ny fihetseham-po dia tanterahana amin'ny toerana ambony eo an-damosiny, eo ambany loha ny ondana kely, ny tongony dia miavaka amin'ny lafiny, ny tànany mandry amin'ny lamosina. Raha matahotra ny hatory ianao, dia ataovy ny fiofanana mipetraka, mihantona eo amin'ny seza na misesika kely, miaraka amin'ny lohanao eo amin'ny tratranao.
Misy karazana fampiharana telo lehibe: havesatra, vatana ary fo.
Ny fitsanganana amin'ny hozatra dia mitovy amin'ny lanjan'ny mpikambana tsirairay. Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fahatsapana fihenjanana.
Rehefa azonao atao amin'ny fotoana rehetra ny fahatsapana fihenjanana ao amin'ny rantsambatanao dia mandehana amin'ny dingana manaraka. Miezaha hampisy hafanana eo amin'ny tananao sy ny tongotrao.
Avy eo dia mianatra mitantana ny taham-ponao. Rehefa avy nahatsapa ny hafanana ianao, avereno ilay rijan-teny hoe "ny fo mangatsiaka, milamina."
Ny làlana avy ao amin'ny fanjakana marefo dia manan-danja, na dia tsy azo atao aza izany noho ny fihantsiana - raha miala tsikelikely ianao, dia tokony hiverina amin'ny asa kely kely ianao.
Misy fanatanjahan-tena hafa ho an'ny fiofanana autogenous, saingy tokony hiova izy ireo aorian'ny fametrahanao ireo fanatanjahan-tena ireo. Ny fomba tsotra indrindra dia ho an'ireo izay mahazatra ny fomba fanao amin'ny tatsinanana, satria ny fisaintsainana no fototry ny fampiofanana autogenika. Aorian'ny fianaranao ny fomba hidirana mora foana ny fanjakana rehetra ilainao, dia afaka manohy ny fomba fiasa manova zavatra ianao.
Teknika hafa amin'ny fitantanana fihetseham-po sy fihetseham-po
Ny fihetseham-po ratsy dia mety ho tapaka foana amin'ny famantarana mifanohitra: ny fialonana dia azo ahena amin'ny fahatokisan-tena, ary ny hatezerana dia afaka manampy hanala ny famelan-keloka sy ny fiadanan-tsaina. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, fitiavana dia mampihena ny fihetseham-po ratsy. Raha tsy fantatrao ny fomba hamporisihana ny fahatsapana fifaliana sy fitiavana, dia ilaina ny mampihatra izany, ny fahatsiarovana mahafinaritra dia afaka manampy.
Indraindray ny fihetseham-po hita taratra amin'ny bika aman'endrintsika, fa ny fifandraisana eo amin'ny endrika ivelany sy ny fihetseham-po dia mifanohitra amin'ny lafiny roa. Izany hoe, manitsy ny lamosiny sy manitsy ny sorony, dia afaka mahatsapa tena matoky kokoa ianao.
Mila fihetseham-po mahery vaika be loatra ny fihetseham-po mahery vaika, ka mety hahasoa ny famonoana kisoa ny sakafo mahavaky ny fahatezerana. Saingy ny mifehy ny fihetseham-po amin'ny ady dia tsy mahomby ity fomba fitsaboana ity - ny hetraketraka dia mety ho irery irery ihany ary tsy misy afa-tsy amin'ny zavatra tsy mananaina.
Matetika, ny famolavolana ny toe-draharaha dia manampy, izany hoe, mba hiadiana amin'ny tahotra, mila mieritreritra ianao fa mampatahotra anao ny toe-draharaha ary mahatakatra ny fomba atao amin'ity toe-javatra ity. Tsy ilaina ny maka hatsaran-tarehy Superman, eritrereto ny fihetsika mifanaraka aminao.
Toe-javatra maro, izay toa tsy mahazatra antsika amin'izao fotoana izao. Noho izany, ao anatin'ny toe-javatra iray izay mandrisika anao tsy handanjalanja, dia eritrereto hoe efa zokinao taona vitsivitsy ianao, toy ny hoe ny zava-mitranga rehetra dia izao.
Ny fahatsapan'ny hatsikana tsara dia mahatonga ny fiainana hibanjina, hianatra hihomehy ny olana, ny ankamaroan'izy ireo ary ny atodin'ny very dia tsy mendrika izany. Ny fanesorana ny toetr'andro ratsy dia hanampy anao hahatakatra izany.
Fifandirana sy fomba hamahana azy ireo
Toro-hevitra momba ny fifandonana
Ny fomba hahatonga anao hatoky tena - toro-hevitra momba ny psikology iray
Ahoana no fomba hametrahana mpiara-miasa amin'ny mpiara-miasa?
Ahoana no hianaranao manoratra lahatsoratra momba ny fampiroboroboana ao amin'ny tranokala sy ny famoahana azy?
Ahoana no hampijanonana ny fahantrana?
The Matrix Eisenhower
Ahoana no tsy hieritreretana ny ratsy?
Dress Dresses 2016
Namboarina tanana tamin'ny tanany manokana
Ahoana ny fomba fialana tsara?
Ny volana voalohan'ny fitondrana vohoka
Aretin-koditra amin'ny tanana - fitsaboana
Akanjo manga avy amin'ny astrakhan - modely sy tena modely
Cupcake miaraka amin'ny mavo mavo
Ny dachshund izay nialona dia tsy namela ny tompon-trano hisambotra ny fifandraisana!
Ny fahitana an'i Ulyanovsk
Sakafo ririnina amin'ny tsaramaso - recipe
Ahoana no handoavana ny lanjany rehefa mampinono?